IBoko Haram ibulale 15 eNigeria | News24
IBoko Haram ibulale 15 eNigeria
Kano - Kushone abantu abangu-15 ngesikhathi iqembu leziqhwaga iBoko Haram lihlasela endaweni esemaphandleni enyakatho mpumalanga neNigeria.
Kuthiwa lezi zihonga zivulele ngenhlamvu zathungela ngomlilo imizi, kusho abazibonele betshela i-AFP.
OLUNYE UDABA: Kushone 11 kuhlasela iBoko Haram
Lesi sigameko senzeke ngoMsombuluko eHuyum, esifundeni esiseBorno, okuthiwa sesiphenduke inkundla yokudlala lezi zidlamlilo.
"Isigodi sonke sishiswe yiBoko Haram. Kucekelwe phansi imizi engu-500," kusho uBukar Zira, obalekele edolobheni elingumakhelwane iMubi.
"Okwamanje kushone abantu abangu-15 kwathi oyedwa walimala," esho.